Ambongadiny Classical Design Pet curved Blade Shears miaraka amin'ny Blue Screw mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Volavolan-tsolika noforonina kilasika miendrika volon-koditra vita amin'ny biriky manga
Modely ： UQ-70C-1
● Ity hety miolaka 7.0 santimetatra ity dia natao manokana ho an'ny fanalefahana volo biby. Ny fihodinana dia manodidina ny 30 degre, noho izany dia mora kokoa aminao ny manapaka ny volon'ny sofin'ny biby fiompy na faritra manokana amin'ny vatana.
● Ny lelany sy ny tahon'ny hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 440C, noho izany dia mateza sy maranitra kokoa izy ireo noho ny hety miolakolaka mahazatra. Ireo kofehy roa amin'ny hety dia azo miraikitra tanteraka, milamina ny fanokafana sy ny fanidiana, ary maranitra ny fanapahana
● Ny tantanan'ny hety dia manana endrika "A" symmetrika ary azo ampiasaina amin'ny tanana havia sy havanana. Na ny aloha na ny ao aoriana amin'ny hety dia azo ampiasaina, fa tsy ny hety miondrika miakatra ary ny hety miondrika ambany. Ny tahony symmetrika dia ahafahanao mitazona tsara ny hety.
● Ny visy avo lenta dia manamora ny fanitsiana ny fihenan'ny hety, ary ny visy manga matevina dia mahatonga ny hety ho voarindra kokoa.
● Ny hety antsika dia 100% namboarina tanana. Misy mihoatra ny 42 ny fizotry ny famokarana hety. Noho izany, manomboka amin'ny fanomanana akora manta ka hatramin'ny fonosana haondrana dia ampiharintsika mafy ny dingana rehetra. Mba hahazoana antoka fa ny hety rehetra eny an-tanan'ny mpanjifa dia fivarotana iray.
Teo aloha: Gunting ho an'ny biby fiompy 3PCS napetraka miaraka amin'ny visy diamondra mena
Manaraka: Hety miloko miolakolaka hety miendrika fikolokoloana biby fiompy